Inamandla kuneNtyatyambo eNyathelweyo · Oyoun | Ukucinga ngokutsha kweNkcubeko
Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo
abafazi* (emva) emfazweni, ephelisa intsingiselo yabasetyhini* kunye nomanyano lobufazi
Umzobo wobugcisa "uIshtar kunye neentyatyambo ezinamandla" nguDariushka Alexander
:: Kumbhalo wesiNgesi, nceda utshintshe isethingi yolwimi kwiwebhusayithi okanye Cofa apha.::
Abasetyhini* (ngemva) kumaxesha emfazwe, ukucinywa ukuba ngumfazi kunye nomanyano lobufazi*
Kwiinkulungwane zamva nje siye sabona iimfazwe ezininzi ezizukisa ukubulala nokufa kwaye zithethelela izenzo zogonyamelo ngokuchasene nendalo (enoluntu). Izizwe, ezazisele zizityebi ngezinto eziphathekayo, zahlutha igunya kwiindawo ezininzi zaza zabangela ukuba abantu bazikhethe ngakumbi. Inkohliso yoloyiso kunye nentando yokoyisa idilika ibe ngamabhodlo apho ilizwe lasemva kwemfazwe lingenako ukuphefumla.
Abafazi baphakathi kule ndyikitya yokufa. Imizimba yabasetyhini iba ngamabala edabi ngenxa yeemfazwe, baba namava abukhali ngakumbi kwaye izakhiwo zabo zifakwa ngaphakathi. Amabhinqa* asemfazweni aphathwa ngogonyamelo phakathi kwebutho labantu, ilizwe nogonyamelo. Noko ke, amava amabhinqa* emfazweni angaphezulu nje kokuba ehlasimlis’ umzimba, ngakumbi kunemeko yokuphazamiseka kwengqondo (ngokwengqondo). Abafazi basemfazweni abangomaxhoba amahlwempu, bakrwada, bomelele kuneentyatyambo ezinyhashiweyo. Kuyo yonke into abayenzayo ukuze baphile, bafana namahlosi avuthayo alwela ubomi bawo.
Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo bubungqina kubafazi* kwiimfazwe, ngokuchasene nokungahoywa kwembali. Ikhanyisa imizabalazo yabasetyhini* abaneembali ezidityaniswe nembali yobukoloniyali kunye nentshukumo yokususa ubukholoniyali: abafazi* eBrazil phakathi kokuxhaphaka kokubulalana kwamabhinqa, abalwa ukulwa* kwiMfazwe yeNkululeko yase-Algeria, kunye “nokuthuthuzela abafazi”, abasindileyo ngokwesondo. ukukhotyokiswa nguMkhosi Wasebukhosini waseJapan. Iimfazwe zama impiriyali zisekelwe kwinkohliso yolawulo-inkohliso efuna ukumisela imeko yobunyani* babasetyhini. Kule nyaniso ichazwe ngokutsha, abafazi* baphila ngokufuduswa nokugxothwa. Ngokufuduka kunye nokugxothwa, ukuvuselelwa kwe-somatic kunye nokwabiwa kwakhona kwendima yentlalo, abasetyhini* bayaqhubeka nokuhlukana kwaye bachaza kwakhona ukuba umfazi* unokuba yintoni.
Imifanekiso emininzi emele amabhinqa* emfazweni iluphawu lwengcinezelo yoosolusapho namathanga: abongikazi abathantamisayo*, oomama abazincamayo*, amaqhawekazi angamabhinqa* enza umsantsa phakathi kwendawo yokuxhela elawulwa ngamadoda. Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo Iphelisa inkolelo "yentyatyambo inyathelwe" - eyaphukileyo kwaye inkenenkene kodwa isentle kwaye ithambile, ijongana nokubini ngokwesini kulwimi lwethu kwaye ibuyisela ubufazi ezandleni zabalwi.
Ngomoya we UBugcisa obungacingiyo (Julietta Singh, 2017). Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo Ukuphaphama kunye namaphupha angaphaya kokulawula. Ulawulo luphuhla “apho kulindelwe kancinci,” oko kukuthi, kanye kwiinzame zethu zokukhulula uluntu. Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo liqonga leemanyano zabafazi*imfundo edibeneyo kunye nokuchasana phakathi kweendlela ezilahla amaqhinga (echasene) nomthetho kunye nokuveliswa kobundlobongela, ukongamela kunye nokukhutshelwa ngaphandle.
Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo lujoliso oluqhubekayo lwe-Oyoun Berlin kunye neeprojekthi zobugcisa ezijongene neendlela ezahlukeneyo zabasetyhini emfazweni. Ugxininiso luya kuqalisa ngo-Epreli wama-2022 ngeprojekthi ethi AS* PAPANGUS ligcisa lase-Afro-Brazilian uBruna Amaro. Ukongeza kwiprogram yoluntu kunye nokunikezelwa kweeprojekthi, i Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo Uthotho lweendibano zocweyo ezidibanisa amagcisa, iingcingane kunye namatsha ntliziyo ukuze baphonononge imiba engundoqo.
Le ngqwalasela yokukhusela ixhaswa yiSebe leSenate yaseBerlin yeNkcubeko kunye neYurophu.
Umkhombandlela wobugcisa: Dami Choi, Louna Sbou.
UDariushka Alexander ligcisa laseMexico-Iranian ngoku elizinze kwisiXeko saseMexico. Indlela kaDariushka yobugcisa luphando oluneenkalo ezininzi noluqukuqelayo oluphenjelelwa lilifa labo elixubeneyo elakhiwe kwilifa lenkcubeko elintsonkothileyo.
I-AS* I-PAPANGUS ngumbhiyozo wecarnival wabafazi* ongayichasanga imizimba ecandekileyo. Kwi-AS* PAPANGUS, igcisa lase-Afro-Brazil uBruna Amaro wenza umdyarho ngeyona ndlela ingaqhelekanga* yobufazi kunye nedelonial kunye nabafazi abangaphezu kwama-50* eSão Paulo naseBerlin.
Inamandla kuneNtyatyambo Enyathelweyo bubungqina babafazi* kwiimfazwe ezichasene nembali yokujongelwa phantsi.
UBruna Amaro ligcisa lase-Afro-Brazilian, umdlali weqonga, umfundisi-ntsapho, umphandi kunye ne-percussionist oseSão Paulo, eBrazil.
AS* IPAPANGU, Bruna Amaro, Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo